🥇 ▷ Taleefannada gacanta oo wata 16 GB Ram, Samsung ayaa dejisa xadka cusub ✅
Taleefannada gacanta oo wata 16 GB Ram, Samsung ayaa dejisa xadka cusub
RAM waa midka ugu yar ee la xisaabiyo markii aad dooraneyso taleefanka casriga ah. Tani waa meesha bannaan ee la heli karo halkaas oo processor-gu ka dhaqaajin karo xog badan, wax markii loo baahdo ay ka sii muhiimsan yihiin waxay moodayaan. Gaar ahaan dhamaadka-sare waa halka adeegsiga qaybo badan looga baahan yahay Samsung-da way ku caddahay. Qaab sidan oo kale ah waxaan arki doonnaa chip oo leh 16 GB qoyska Galaxy S..
16 GB Samsung RAM ayaa jidka kujira
Samsung waa mid ka mid ah shirkadaha ugu wanaagsan ee lagu qiimeeyo suuqa. Kuwa gacmahaaga ku jira “Galaxy S o note” Way ogyihiin inay leeyihiin matoorka ugu awoodda badan suuqa, laakiin taasi lama caddeeyo inay si fudud dhaqaajinayaan sawirro deg deg ah oo kujira app-kaaga, duubista 4K, ama haysashada shaashad leh heerkul sare. Dhamaan howlahaani waa natiijada processor wanaagsan iyo RAM oo taageera.
Iyada oo ay jiraan baahiyo badan iyo inbadan, shirkadaha Kuuriyada waxay ka fakarayaan inay kordhiyaan xadka cusub ee jiilalka soo socda iyo kuwa ku yaal Kuuriya. 16 GB xusuusta cusub ee LPDDR5. Nooca ugu dambeeyay ee qalabka oo leh 12GB RAM ayaa ah isla qeybtaas, sidaa darteed waxaan wajahaynaa koror ku yimaada awooda chip oo bixin doonta xulashooyin badan oo aaladaha mustaqbalka ah. Faa’iidooyinka ayaa ka mid ah Ku wareejiyo 5.5 MB daqiiqaddii, taas oo aad uga sarreysa jiilkii hore. Waxa kale oo ay adeegsan doontaa isla boos la mid ah kii hore, waana in aynaan hadlin inbadan oo aan ka yarayn a 10 nanometer chip.
Xuduudaha cusub ee guryaha Kuuriyada
Sidaan nidhaahno imaatinka 16 GB RAM ee taleefannada gacanta ee Samsung sidoo kale waa safka cusub ee shirkadda. Muuqaalkaani waxyar ayuu u kordhay jiilkii ugu dambeeyay, laakiin midkan ugu dambeeya, Terminalyo leh ilaa labo lambar ayaa lagu arkay muuqaalkaan muhiimka ah, gaar ahaan heerarka sare.
Su’aal kama taagna, waa wax cusub 16 GB LPDDR5 ayaa noqon doona jaangooyaha mustaqbal ee Galaxy S. Shirkadda Weli waa xilli hore in la ogaado waxa lambarka taleefanka casriga ahi yahay, maxaa yeelay xusuusnow in shirkaddu ka gudubtay Galaxy S10 ilaa S20 ay ka boodday sagaal lambar oo dhexda ku jiray.